पत्रकारले सरकारी कार्यालयको तेल भिक माग्दै घुम्न लाज लाग्दैन ?::Best News Experience from Nepal
देशका केहि सिमित पत्रकारहरु सरकारी कार्यालयबाट सहयोगका नाममा पेट्रोलियम पदार्थको भिक माग्दै घुम्न जाने र सेल्फी खिचेर फेसबुकमा राख्दै तमासा देखाउने गरेको सायद धेरैले देख्नु भएकै छ होला ।
पत्रकारिता सम्मानित पेशा हो । सरकारी तथा जुन कुनै संस्था र ब्यक्तिलाई दोहन गर्ने विरुद्ध कलम चलाउने पेशा हो । तर उसैले त्यसरी दोहन गर्छ भने त्यो पेशाका नामधारी त्यो कलंकित पात्र हो । पत्रकारले वैद्यानिक रुपमा पाउने सुचना (विज्ञापन) बाहेकमा लालच देखाउनु र लिनुलाई अब घुस मागे विरुद्धको कार्वाही गरिनु पर्छ । कि त्यसले म दरिद्र हुँ भनेर भिक मागेको हुँ भनेर भन्नु पर्छ ।
निश्चित रुपमा कुनै पनि संघ संस्था वा राजनैतिक दलको संगठनहरुले कुनै ठुलो कार्यक्रम गर्दा रसिद सहित चन्दा माग्ने गरेको परम्परा अझै छ । त्यस्ता कार्यक्रममा सहयोग आदान प्रदान स्वभाविक मानिन्छ । तर ब्यक्तिगत रुपमा फोन गरेर वा भेटेर सहयोग माग्दै , नगद भएन भने सरकारी कार्यालयको पेट्रोलियम पदार्थको कुपन कटाउँदै लिदै गर्दा कैयौ सरकारी कार्यालयको खर्च बढेको छ ।
हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार पत्रकारितामा कतिपय बरिष्ठ भनाउँदाहरु तर कलम भने कम नचलाउँदाहरु यस्तो कार्यमा बढि संग्लग्न छन । सरकारी कार्यालयमा काटिएका तेलका कुपनहरु बारे छानबिन होस् । हरेक जिल्लाका पत्रकार महासंघहरुको गतिविधी बारे पनि निगरानी होस् । पत्रकार महासंघको केन्द्रले खै हेरे को ?
कुनै उद्घाटन वा कुनै कार्यक्रमको प्रमुख अतिथीको खादा ओढ्ने निम्ताए मात्रै आउने अघि पछि वास्तै नगर्ने प्रवृद्धिका कारण जिल्लाका महासंघका केहि सिमित पदाधिकारीहरुले निरुङकुसता लादेका छन । नयाँ साथीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो निरुत्साहित गर्ने, कसरी त्यसलाई गिराउने र दवाबमा राख्ने गरेको गुनासो छ ।
भन्नुस त खास बिकेको को हो ? जुन चाँही सरकारी कार्यालय प्रमुखहरु संग सधै जाँड खाएर बस्छ उसले कहिल्लै ति कार्यालयहरुका अनियमित्ता भ्रष्टचारहरु विरुद्ध लेख्ला ? महासंघका नाममा पत्रकारहरुको ठेक्का लिने तपाई को हो ? पत्रकारहरु आफैमा स्वतन्त्र छन त्यसो हुँदाहुदै पनि आचारसंहिताका विषयमा भने लगाम लगाउनुस ।
जथाभावी लेख्ने छुट पनि कसैलाई छैन । एउटा जिल्लामा एउटा गाईजात्रा सुनिएको छ । जुन सुकै औपचारिक कार्यक्रममा एउटा संस्थाको प्रतिनिधीत्व एक जना ब्यक्तिले मात्रै गर्दछ । तर सुनिएको छ त्यहाँ पुगेको अध्यक्ष देखि कार्य समितिको सदस्य सम्मलाई अतिथीका रुपमा आशन ग्रहण गराउन लगाईन्छ । जहाँ आफैले बनाएको सदस्य भन्दा प्रेस युनियन , तत्कालिन प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरको नेतालाई तल पारिन्छ । यो कहाँको शासन ? त्यस्ता निरङकुसहरुको दवाबमा बस्नु भन्दा कृपया नयाँ साथीहरु ठाउँ छाडौं वा संघर्ष गरौं ।
महासंघमा नभएका अन्य राजनैतिक दलमा आश्था राख्ने साथीहरुको सम्बोधन पनि गर्न नपर्ने । कार्यक्रमहरुमा प्रतिनिधीत्व गराउँदा पत्रकारका संगठनहरुलाई आफु एक्लैले कुर्लुम्मा खाने । संगठनहरुको अस्तीत्व नामेट पार्ने । पुर्व अध्यक्षहरुको पाला सम्म संगठनहरुको अस्तीत्वलाई जिवित राखिएको थियो ।
अहिले आफै जन्मेको संगठनलाई समेत अस्तीत्व विहिन पारिएको छ । महासंघको अध्यक्ष भएँ भन्दैमा अरुको अस्तीत्व समाप्त पार्नेहरुलाई सायद उसको पार्टीले पनि छाड्दैन होला र सहकर्मीहरुले पनि धेरै दिन सहेर नबस्लान । सबै औपचारिक कार्यक्रममा आफैले मात्र प्रतिनिधत्व गर्ने । यस्तो त पुर्व अध्यक्षहरुको पालामा देखिएन भन्छन साथीहरु ।
अतिका विरुद्ध अर्कोले पनि अति गर्छ नै । विभिन्न कार्यक्रमको नाममा उठाईएको तेलको विवरण पत्रकार महासंघमा हुनु पर्ने कि नपर्ने ? प्राप्त जानकारी अनुसार तपाई कै घुमुवा मध्येका एक जनाले एउटा संस्थाबाट नोटको बिटो बोकेर राख्नु भएको छ । त्यो रकम र अरु मित्रहरुले उठाएको रकमको विवरण अब चाहियो हजुर ।
अर्को कुरा सम्पादक मण्डलाम बस्नेहरुले पनि समाचार सम्प्रेषण गर्ने विषयमा विभेद नगरौं । पुरस्कार वितरण लेख्नेहरुलाई दिनेकी राजनैतिक दलको कोटा र अनुहार हेरेर दिने? यो पनि ख्याल गरौं ।
भदौ–८ , २०७५
बुटवल । गुल्मी जिल्लामा गोजाग्रत पुर्णीमाको दिन हुने अर्जै र ऐतिहासिक...
सिन्धुपाल्चोक बस दुर्घटना : मृतकको संख्या १४ पुग्यो, घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार
सिन्धुपाल्चोक।सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकामा दसैँका यात्रु बोकेको काठमाडौंका लागि छुटेको बस दुर्घटना...
बिरामि हरुको उपचार राम्रो सग गरिरहेका छौ अध्यक्ष : भुसाल लङका यातायात
सूर्य भुसाल अर्घाखाँची।लङका यातायातका अध्यक्ष कृस्न बहादुर भुसालले केहिदिन अगाडि दुर्घटनामा परेका...
प्रहरिले मनायो ६४ औ स्थापना दिबस
सूर्य भुसाल अर्घाखाँची।जिल्ला प्रहरी कार्यलय अर्घाखाँची ले ६४ औ प्रहरी दिवस विभिन्न...
विप्लवका सल्यान जिल्ला सदस्य पेस्तोलसहित पक्राउ परेका छन् ।विप्लव नेतृत्वको नेकपाका...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद र अनुहार नहेरी अपराधबारे...
काठमाडाैं ।नेपाल सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति...